KBC Archives - Khalti
खल्तीसँगको कारोबार रु. १ करोडको उपहार (को बन्छ करोडपति योजना)
Posted on May 3, 2019 May 3, 2019 by Khalti Digital Wallet
आदरणीय खल्ती प्रयोगकर्ताहरु, खल्तीसँगको कारोबार रु. १ करोडको उपहार योजना अन्तर्गत खल्ती प्रयोग गरी तल उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा एक जना खल्ती प्रयोगकर्तालाई को बन्छ करोडपति को फास्टेस्ट फिङ्गर फस्टमा हामीले पुर्याउने छौँ । को बन्छ करोडपतिको नियम अनुसार उहाँले रु. १
Posted in offersTagged ‘खल्ती’, KBC, KBC Nepal, Ko Bancha Crorepati, Ko Banchha Crorepati, को बन्छ करोडपति, खल्ती डिजिटल वालेट, खल्ती पसल, खल्ती प्रयोगकर्ता, फास्टेस्ट फिङ्गर फस्ट